Amakhemikhali Ahlanganisiwe eLipid Nanoparticles nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Izithwali zezidakamizwa ezinobukhulu obukhulu be-Nano zisetshenziselwa kabanzi ukuletha amakhompiyutha asebenzayo emithini kumaseli ahlosiwe. Ukuze ubethele izinto ezisebenzayo kwisithwali somuthi esine-bioavailability ephezulu, kusetshenziswa ama-nanoparticles aqinile we-lipid. I-Ultrasonic nano-emulsization kanye ne-encapsulation iyindlela ethembekile yokukhiqiza inani elikhulu lezinto ezisezingeni eliphakeme ze-nano ezifana ne-lipid nanoparticles, i-nano-ehleliwe ye-lipid carriers kanye ne-liposomes.
Phakathi kwalesi sifo esiwubhubhane se-COVID-19 Hielscher Ultrasonics sibeka yonke imiyalo yomkhakha wezemithi. Sicela ubuze ukucutshungulwa kwe-oda kusengaphambili kanye nokuhanjiswa kwempahla okusheshayo!
I-Ultrasonic Nano-Emulsification ne-Encapsulation
I-Sonication iyakwazi ukuphazamisa izigaba zamafutha nezamanzi futhi ixube amaconsi amancane e-oyili emanzini. Njengoba inqubo ye-emulsification ye-ultrasonic ingalawulwa ngokuqondile, i-emulsization ye-ultrasonic kanye nenqubo elandelayo yokwakha i-nanoparticles eqinile-yolid iyakwazi ukukhiqiza i-sonoparticles sonication ekhiqizayo ingakhiqiza ubukhulu obukhulu be-Droplet ngokuqhathaniswa nezindlela ezijwayelekile ze-emulsion.
Njengoba i-nano-emulsization ye-ultrasonic n encapsulation ingalawulwa ngokuqondile, inqubo ye-sonication ivumela ukulawulwa okuqondile kwesayizi eqinile ye-lipid nanoparticle nokulayishwa kwayo.
I-Ultrasonic nano-emulsation isetshenziselwa ukukhiqiza ama-nano-emulsions, ama-liposomes nama-nanoparticles aqinile. I-Sonication ikhiqiza ukusatshalaliswa kwe-droplet emincane kanye nezinhlayiya ezihlelwe ngendlela ethile.
Ngenkathi i-lipid nanoparticles (i-SLNs) enkulu yama-lipid ingalayishwa ngenqwaba ephezulu yezinto ezisebenzayo, ama-SNL amancane akhombisa ukukhuphuka kakhulu kwe-kinetics yokufaka kanye nesikhathi esijikeleziwe sokusakazeka emzimbeni womuntu.
I-Hielscher Ultrasonics homogenizer ikunikeza ukulawula okugcwele kwamapharamitha enqubo anjenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, isikhathi se-sonication nokufakwa kwamandla. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhulise iresiphi eyenziwe ngezifiso yokwakheka kokuqina kwe-lipid nanoparticle. Ukulungiswa kwe-lipid nanoparticles kuhambelana nemithombo eminingi ye-lipid nama-emulsifiers.
I-Sonication iphumela ekuhanjisweni ngosayizi omncane wezinhlayiyana, ngakho-ke kuholela ekuzinzeni okuphezulu ngesikhathi sokulondolozwa.
I-UIP1000hdT ngomphumela wokugeleza kwengilazi ukukhiqizwa okuqinile kwe-lipid nanoparticle
Izinyathelo zokukhiqizwa kwe-ultrasonic zeSolid-Lipid Nanoparticles
Ayini ama-Solid-Lipid Nanoparticles?
Ama-solid lipid nanoparticles (SLNs) ayindlela ejwayelekile yokuthwala izidakamizwa e-nano, engakwazi ukufaka amakhompiyutha we-bioactive noma wemithi. Bangakwazi ukuthuthukisa ukulethwa kwezidakamizwa kuma-lymphatics wamathumbu futhi bathuthukise ukungena ngaphakathi kwezicubu ngezinga eliphakeme lokulethwa kwama-Therapeutics. Ama-SNL angafaka izidakamizwa ze-lipophilic emgodleni wazo we-lipid, kanti ukugoqa okwenziwe ngenhla kwenza i-nanoparticle inganyibiliki emanzini futhi ibanikeze i-bioavailability ephezulu. Ama-SNL anesimo esiyindilinga futhi aqukethe umsuka oqinile we-lipid oqiniswe i-ejenti yokuqinisa (i-survivant, co-survivants).
Imithombo ejwayelekile ye-lipid ne-triglyceride yi-tricaprin, trilaurin, trimyristin, i-tripalmitin, i-tristearin, i-glyceryl monstearate, i-glyceryl behenate, i-glyceryl Palmitstearate, i-cetyl palmitate, i-acid ye-stearic, i-palmitic acid, i-decanoic acid, i-behenic acid, i-glycol estes.
Njengoba i-survivant kuma-lipid nanoparticles aqinile ama-lecithin (isib. I-soy lecithin, i-lecithin yeqanda, i-lecithin yamaqanda), i-phospholipids, i-phosphatidylcholine, i-sphingomyelins, i-bile salts (i-sodium taurocholate), ama-sterols (cholesterol), i-poloxamer 188, 182, 18olo, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182. , i-polysorbate 20, 60, ne-80, i-sodium cholate, i-sodium glycocholate, i-taurocholic acid sodium usawoti, i-taurodeoxycholic acid sodium usawoti, butanol, butyric acid, dioctyl sodium sulfosuccinate, monooctylphosphoric acid sodium phakathi kwabanye isetshenzisiwe.
Njengoba ama-nanoparticles e-lipid aqinile aqukethe ama-lipids afanayo ngokomzimba atholakala emzimbeni womuntu, abhekwa njengabekezeleleke kahle. Zingahanjiswa ngomlomo, ngaphakathi nangaphakathi.
Ama-Ultrasonicators aphezulu enza umsebenzi we-Solid Lipid Nanoparticles
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'zisetshenziselwa kabanzi ekwenziweni kwemithi nokwengezekisa ukwakha ama-nanoparticles aphakeme aphezulu we-lipid nama-liposomes afakwe izinto zemithi, amavithamini, ama-antioxidants, ama-peptides nezinye izinto ezihlanganisiwe. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, abakwaHielscher bahlinzeka ngama-ultrasonicators avela ku-compact, nokho enamandla aphethwe ngesandla ama-lab homogeniser nama-bench-top ultrasonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu wezinqubo zokwenziwa kwemithi. Uhla olubanzi lwama-sonotrodes we-ultrasonic kanye nama-reactors ayatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okuphezulu komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Basarkar A., Devineni D., Palaniappan R., Singh J. (2007): Ukulungiselela, ukubekwa uphawu, ukusebenza kwe-cytotoxicity kanye nokudluliselwa kokusebenza kahle kwe-poly (D, L-lactide- co-glycolide) ne-poly (D, L-lactic acid) i-cationic nanoparticles yokulethwa okulawulwayo kwe-DNA ye-plasmid. Int J Pharm 343: 247-2525.
I-Dai Ch., Jin Z., Zhao Y., Cui H., Wang Y. (2013): Ukulungiselela kanye nokusebenza kwe-Newcastle Disease Virus DNA Vaccine Kuhlanganiswe ku-PLGA Nanoparticles. I-PLoS ONE 8 (12), 2013.
I-Solid Lipid Nanoparticles njenge-Drug Carriers
Ama-nanoparticles aqinile we-lipid ngokuvamile anomumo oyindilinga obubanzi obuphakathi kwamamitha angama-10 kuye kwangama-1000. Ama-nanoparticles aqinile we-lipid ane-matrix eqinile ye-lipid lapho ama-molecule we-lipophilic angaxazululwa. Isisekelo se-lipid singaba nezakhi ezihlukile zamafutha, okusho ukuthi igama elithi "lipid" lisetshenziswe ngomqondo obanzi ohlanganisa ama-triglycerides (isib. Tristearin), diglycerides (isib. Glycerol bahenate), monoglycerides (isb. Glycerol monstearate), amafutha acid (isib. ), ama-steroid (isib. cholesterol), kanye ne-waxes (isib. cetyl Palmitate). Umgogodla we-lipid uqiniswa (ikakhulu inhlanganisela yama-ejenti we-emulsifying agents (i-survivant) akhethwe ngokuya ngendlela yokuphatha.
Imithi yokugomela ye-RNA isebenzisa ama-RNA (mRNA) okwenziwe ngemithi evikela amaprotheni aqhamuka ebusweni begciwane Lezo zingqa ze-mRNA zihlanganiswe kuma-nanoparticles e-lipid aqinile ukuze kuvuse impendulo yamasosha omzimba abantu kuleligciwane.